Vaz 11193 - Stylish Compact
I-umnyango emihlanu "Kalina" sizindza efanayo kancane emifushane (Nokho, ngokusobala, okuyinto vele ngamafuphi) sedan, lonke - kungcono okufanayo stylish izibani slanted, imigqa evumelanayo hood futhi le Izinsimbi, umzimba ofanayo nokulula. Ukwenza ukukhanyisa umbono ngokuphelele omuhle, ikakhulukazi ngokumelene isizinda wachayeka izibani-e-omunye onobuhle odlule. Vaz 11193 isiqu kuqhathaniswa ne Sedan sasondelana kakhulu (240 l kuphela.), Kodwa eligoqiwe emuva noma omunye izingxenye zayo, le moto encane kungenzeka ukuba athwale imithwalo eside. By the way, esihlalweni esingemuva emotweni ngesikhathi sonke compact, ngeke eduze. Lapha, njengokungathi sedan, kungenzeka ukuba ahlale endleleni, okuyinto engingeke ngikwazi ukuyikhokhela ngisho imishini eminingi ekilasini ephakeme ukwedlula Vaz 11193.
Ngokuqondene nezwe, Upholstery Indwangu ibukeka elula, kodwa avulekile, ezithakazelisayo ukubukeka umnyango izibambo. Lapha ngeke ukuthole ezihlukahlukene omkhulu emaphaketheni, zezitsha nemicengezi inkomishi ukuthi ngokuvamile egcwele izimoto nekilasi efanayo zokukhiqiza angaphandle, Nokho, kwenza saloon hatchback ivulekile nakakhulu. amafasitela Amandla, maye, kungukuthi enikeziwe, nakuba umnyango has a niche ukukhweza okhiye ezifanele. Landing ku esihlalweni somshayeli akuyona ukhululekile kakhulu ngenxa yokuthi ngempela esihlalweni okusezingeni eliphezulu ingekho izinguquko. Steering ikholomu okunalokho kulawulwa, kodwa akwanele ukuqinisekisa izinga elifanele wenduduzo. Ezinye izindaba zika-design lobuchwepheshe kwelinye lamagumbi umgibeli akakubangeli izikhalazo, ideshibhodi ubukeka zesimanje kakhulu, ukhululekile futhi umbala nokuma kwawo, kodwa ukukhanya inkomba ingabekwa ehlelekile.
It ngesivinini imoto Lada "Kalina" ngokushelela futhi ngokushesha ngesikhathi esifanayo. Ngokuya Dynamics, kunganikeza ngisho kangakanani izingqinamba iningi Vaz imoto umugqa. okubuyayo ufanelwa eziqondisa - Ukuqinisa ifaniswe kahle, kukhona impendulo. Ngo onobuhle yangaphambilini ye Vaz ngenhlanhla kuphela baphupha izilungiselelo enjalo. Vaz 11193 "Kalina" ungaphakathi ithuba kahle, imoto uyabikelwa ukushayela futhi kahle igcinwe komgwaqo.
Sekuyisikhathi ukubukela imoto ngenkathi ushayela. Njengoba kulindelekile, gumbi namanje azizwa umsindo injini - le nkinga kuvamile kubo bonke, ngaphandle kokukhetha, VAZs. Kepha-gearbox Vaz 11193, yabe isihamba ke ngempela ezithakazelisayo - course yokuqala ukudluliswa imfushane kakhulu, kubalulekile ukwandisa ukudluliswa cishe ngokushesha. I wesibili nowesithathu - kunalokho, abe-stroke eside, ngakho-ke, ngezinye ride okudliwa phakathi komuzi, ungakwazi cishe ushintshe, okuyinto ekahle kakhulu. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe ukudluliswa - uvala ezosetshenziswa igiya reverse, ukudluliswa akukwazi kudidaniswe ngowokuqala.
Yiziphi iziphetho kungenziwa shi mayelana Vaz 11193? Hatchback wawuhlangene kakhulu kodwa ivulekile - lezi zimfanelo ezibalulekile endaweni imigwaqo yedolobha imoto aminyene. Noma yimiphi imibuzo mayelana Upholstery, ukulungisa ezinye izingxenye futhi ergonomic ukushayela isikhundla, kodwa okuvelayo jikelele akhayo - izimoto ezifana besidinga nakanjani.
Ford Edge: enamandla, kodwa baqaphe
Thermostat Vaz-2110. Yini futhi kanjani?
Amakati Siamese: incazelo zohlobo
Abantu White. Ukwahlukanisa izinhlanga womuntu
Kubaluleka Economics. Intengo - kungcono ...
Uyini umsebenzi wezandla? izinhlobo Kwalo izinhlobo
Entsha ibalazwe kaMasipala: Moscow 2015-2020